Dalet no manendry an'i Patricio Cummins amin'ny maha mpitantana ankapobeny ny Dalet Asia-Pasifika - Vaovao ny NAB Show avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster of NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Dalet no manendry ny Patricio Cummins amin'ny maha mpitantana ankapobeny ny Dalet Asia-Pacific
Dalet no manendry ny Patricio Cummins amin'ny maha mpitantana ankapobeny ny Dalet Asia-Pacific
Paris, France - Septambra 11, 2019 - Dalet, mpamatsy fiasa vahaolana sy serivisy ho an'ny mpampita vaovao sy matihanina matihanina, androany dia nanambara ny fanendrena an'i Patricio Cummins amin'ny maha General Manager of Dalet Asia-Pacific (APAC). Miorina amin'ny foibem-paritra Dalet any Singapore, Cummins no tompon'antoka amin'ny varotra Dalet, tetikasa ary ekipa fahombiazan'ny mpanjifa manerana ny faritany APAC. Cummins, izay niaraka tamin'i Dalet tamin'ny alàlan'ny fahazoana ny orinasam-barotra Ooyala Flex Media Platform, dia filoha lefitry ny varotra teo aloha tany Ooyala Asia-Pacific sy Japan (APJ).
"Miaraka amin'ny ekipan'ny Dalet i Patricio manana traikefa an-taonany roa amin'ny sehatry ny fampielezam-baovao, haino aman-jery sy fifandraisan-davitra ary voarakitra an-tsoratra voaporofo mahomby amin'ny famolavolana orinasa vaovao ary miitatra amin'ny tsena vaovao manerana an'i Azia Pasifika. Izy dia mpitarika voaomana tsara izay mitondra fahaiza-manao, hafanam-po ary fomba fijery vaovao amin'ny ekipa. ” Hoy i Stéphane Schlayen, lehiben'ny mpiasan'ny mpiasa, Dalet. "Samy manana ny laza adidiny i Dalet sy Ooyala any Azia Pasifika fa rehefa mitambatra dia manana avona mampanantena kokoa aza eo ambany fitarihan'i Patricio. Maniry azy hahita fahombiazana lehibe amin'ny ezaka vaovao nataony isika. ”
An IABM Ny mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny APAC, Cummins dia nitana toerana lehibe niaraka tamin'i Ooyala hatramin'ny 2014, mitondra ny mpanjifan'ny fananganana sy ny fitantanana ireo serivisy serivisy, voalohany any amin'ny faritr'i Amerika Latina, avy eo amin'ny APJ. Ny fahaiza-manaony mavitrika dia nanampy ny mpanao gazety, marika orinasa, telcos, liga ary ekipa mpanao fanatanjahantena manavao ny rojin'ny famatsiana votoaty ary hampihenana ireo traikefa isan-karazany fanaingoana.
Nandimby an'i Cesar Camacho ny Cummins, izay nametraka andraikitra vaovao tao Dalet amin'ny maha Lehiben'ny Fampivoarana ny Business ho an'i Amerika Latina. Schlayen namarana, “Te-hisaotra manokana an'i Cesar aho tamin'ny fanokanan-tena nataony ho amin'ny fitantanana ny asa Dalet manerana ny APAC. Ny fandraisany anjara dia manan-danja amin'ny fitaterana ny fandrosoantsika ny fandraharahana, ny fitomboana ary ny fahombiazan'ny mpanjifa. Matoky aho fa hitondra ny fanoloran-tena sy ny zava-bita mitovy amin'ny tsenan'ny Amerika Latina izy. ”
Hihaona amin'i Patricio Cummins sy Dalet @ IBC2019
Ny mpanatrika IBC2019 dia afaka mametraka fanendrena iray hihaona amin'i Patricio Cummins na hanao fihetsiketsehana manokana na fifampidinihana amin'ny alàlan'ny mpandalina Dalet hahafantatra bebe kokoa momba ireo vokatra sy vahaolana farany eto. www.dalet.com/events/ibc-show-2019.
Afaka mifandray amin'i Alex Molina ao amin'ny gazety [mailaka voaaro] ny hanaovana fandaharam-potoam-baovao.
Miaraka tsara - Miaraha aminay amin'ny hetsika Dalet Pulse tena manokana @ IBC2019!
Ity IBC2019, ny fihaonana an-tserasera fanaovan-gazety Dalet Pulse dia hanitatra ny lampihany hampidirany an'i Ooyala. Fankalazana ny fidiran'ny ekipa haino aman-jery roa sy haitao lehibe, ny lohahevitra Dalet Pulse amin'ity taona ity, Better Together, hanome ny mpanatrika hianatra momba ny portfolio portfolio vokatra bebe kokoa sy ny fomba hanampiana ny orinasam-baovaom-pampianarana amin'ny famolavolana famatsiana votoaty votoaty, mampita traikefa tsy manam-paharoa amin'ireo mpihaino sehatra maro ary mampitombo ny vola miaraka amin'ny vahaolana Dalet sy ireo teknolojia mpiara-miasa. Fotoana iray tsy itovizany ihany koa hihaonana amin'ny ekipa mitombo.
Alakamisy, 12 Septambra
Fanalahidy: 17: 30 - 19: 00
Antoko: 19: 00 - 22: 00
Misoratra anarana izao amin'ny alàlan'ny www.dalet.com/events/dalet-pulse-ibc-2019.
Ny vahaolana sy ny serivisy Dalet dia mamela ny fampahalalam-baovao mahaleotena hamorona, hitantana sy hizara ny votoatiny haingana sy haingana kokoa, hanamafisana tanteraka ny sandan'ny fananana. Miorina amin'ny alàlan'ny fototra maoderina, manome fitaovana arifomba matanjaka manome hery ny endriky ny endriny farany amin'ny vaovao, ny fanatanjahantena, ny fiomanana amin'ny programa, ny famokarana lahatsoratra, ny archives ary ny fitantanana ny tranonkala, ny radio, ny fampianarana, ny governemanta ary ny orinasa.
Ny sehatra Dalet dia azo henoina sy modular. Manolotra fampihetseham-pandaharana izay manana fahaiza-manao ilaina izy ireo hiantsoana ireo asa goavana amin'ny asa goavana ho an'ny fampahalalam-baovao lehibe - toy ny fandrindrana, famoronana orinasa, fanalana, katalaogy, famoahana, chat & fanamarihana, transcoding, milalao automation, fizaràna samihafa sy analytics.
Tamin'ny volana Jolay 2019, nanambara ny fahazoana orinasa Ooyala Flex Media Platform i Dalet. Haingam-pandeha ny iraka ataon'ity orinasa ity dia manome lanja lehibe ny mpanjifa Dalet sy Ooyala izay manokatra be dia be amin'ny fizarana OTT & nomerika.
Ny vahaolana sy serivisy Dalet dia ampiasaina manerana an'izao tontolo izao amin'ny mpamokatra atody sy mpaninjara an-jatony, ao anatin'izany ny mpamoaka fizaram-bahoaka (BBC, CBC, France TV, RAI, TV2 Danemark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), tambajotra ara-barotra ary mpandraharaha (Canal +, FOX, MBC Dubai, Mediacorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius XM Radio), fikambanan'ny fanatanjahantena (National Rugby League, FIVB, LFP) ary ireo sampan-draharahan'ny governemanta (UK Parliament , NATO, Firenena Mikambana, Veterans Affairs, NASA).
Dalet dia varotra eo amin'ny NYSE-EURONEXT tahiry fifanakalozana (Eurolist C): ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT: FP, Reuters: DALE.PA.
Dalet® dia voasoratra amantarana ny Dalet Digital Media Systems. Vokatra hafa rehetra sy ny famantarana voalaza etoana isan 'ny tsirairay avy ny tompony.
Ho fampahalalana bebe kokoa momba an'i Dalet, tsidiho www.dalet.com.
Sigma dia manambara ny vidin-tsarimihetsika sy ny fahazoana mivoaka amin'ny tsipika famenon'ny lesoka ara-tsarimihetsika tena kanto vita amin'ny karazan-javamaniry sy / i teknolojia Cine Art Prime PL-Mount - Desambra 6, 2019
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie fampitana injeniera fampitana Engineering Cobalt Encoder fandraisana anjara Dalet fanovana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Ooyala OTT SJGolden - Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC The Colonie Ny Colonie - News THE COLONIE / Chicago TVU Networks Ultra HD Forum Video injeniera virtoaly zava-misy	2019-09-11
Previous: Facilis dia mampiasa trano famakiam-bokin'i Qualstar LTO ho an'ny Archive sy ny fanamafisana ny Object Cloud Integrated vaovao
Next: Sohonet Hamoaka ny Appartan'ny Ffaha-mazavaVaryView Flex amin'ny Apple TV